Baolina kitra - Can sy mondial :: Mila mivonona hatrany ny Barea • AoRaha
Tokony hanana ny fahavononana foana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin’ny taranja baolina kitra na ny Barea amin’ny fiatrehana ny dingan’ny fifanintsanana eo amin’ ireo fifaninanana iraisampirenena roa goavana, dia ny fiadiana ny ho tompondakan’ i Afrika (CAN) 2021 hotanterahina any Kamerona, sy ny dingan’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany (Mondial) 2022 any Katara.
Notsindrian’ny filohan’ny Kaonfederasiona afrikana ny baolina kitra (CAF), Ahmad, fa hotazonina hatrany ny datin’ny lalaon’ny CAN amin’ny janoary sy febroary 2021. Manana fotoana hanatontosana ny dingan’ny fifanintsanana, izay nahemotra farany teo, ny CAF amin’ny volana septambra na oktobra na novambra amin’ity taona ity. ”Mila mifampiresaka amin’ny Fifa izahay amin’ny fanatanterahana an’izany. Ny andro fahadimy amin’ny fifanintsanana CAN amin’ny volana jona kosa no mbola tsy misy filazana hoe ahemotra na hotazonina, fa miankina amin’ny fivoaran’ny toedraharahan’ity valanaretina Covid 19 ity ihany”, hoy ny filohan’ny CAF.
Ilaina hatrany ny fahavononana ara-tsaina sy arabatana ho an’ireo mpilalaon’ ny Barea. “Na dia ao anatin’ ny fotoana fihiboana aza isika, amin’izao fotoana izao, dia afaka manao fanazarantena samirery any an-trano ireo mpilalao, toy ny fanamafisana ny hozatra rehetra, eo amin’ny sandry , kibo ary ny tongotra”, araka ny hafatry ny mpanazatran’ny Barea, Nicolas Dupuis ho an’ireo mpilalaony.
Mitana ny laharana voa lohany vonjimaika i Madagasikara eo amin’ny vondrona misy azy amin’ny fifanintsanana hiakarana amin’ny dingana famaranan’ ny CAN 2021. Miandry ny lalao voalohany kosa ny ekipa nasionaly amin’ny fifaninanana hiadiana ny tapakila amin’ny amboara eran-tany.
Fiainana mpilalao baolina kitra :: Miady amin’ny tsimok’aretina Covid-19 koa i Bapasy